कालीञ्चोकमा केबुलकार चल्यो » खबरहरुको एउटै केन्द्र
शनिबार, कार्तिक १७, २०७५ २२:३२ मा प्रकाशित !
काठमाडौं । दोलखाको धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्र कालीञ्चोकमा आजबाट व्यावसायिक रुपमा केवलकार सञ्चालन भएको छ ।
कालीञ्चोक केबलकारमा ४ वटा कार रहेकोमा एउटा कारमा एक पटकमा १० जनाले यात्रा गर्न सक्ने कालीञ्चोक दर्शन लिमिटेडले जनाएको छ । त्यसमध्ये हाल एउटा कार सञ्चालनमा ल्याइएको छ । कालीञ्चोक दर्शन लिमिटेडले साँढे २ वर्षअघि निर्माण शुरु गरेको कालीञ्चोक केबुलकार करीब ४५ करोडको लागतमा सम्पन्न भएकोे हो ।
केबलकारमा यात्रा गर्न आउने यात्रुलाई प्रतिव्यक्ति ५ सय शुल्क लिएर सेवा प्रदान गरिएको अधिकृत शिवाकोटीले बताए । सर्वसाधारणलाई ५ सय शुल्क लाग्नेमा कालीञ्चोक क्षेत्रका मानिसलाई भने केही सहुलियत हुने कालीञ्चोक दर्शन लिमिटेडले जनाएको छ ।
PREVIOUS POST Previous post: विराटनगरको चितवनसामू १४६ रनको लक्ष्यलक्ष्य
NEXT POST Next post: ४ वर्षभित्र सांसद भएरै छोड्छुः गौतम
बस दुर्घटना, एकको मृत्यु, आधा दर्जन बढी घाइते शनिबार, कार्तिक १७, २०७५ २२:३२
प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम सिफारिस शनिबार, कार्तिक १७, २०७५ २२:३२
नेकपाले न्यूरोडमा लगायो डोजर, यस्ता छन् ६ कारण शनिबार, कार्तिक १७, २०७५ २२:३२
निर्वाचित रेशमलाई जेल कोचेर ठूलो अन्याय : नेतृ हिसिला यमी शनिबार, कार्तिक १७, २०७५ २२:३२
निर्मला हत्या प्रकरणः प्रदीप-विशाल पनि दिलिपजस्तै ‘नक्कली’ अभियुक्त ? शनिबार, कार्तिक १७, २०७५ २२:३२